ပုသိမ်က ဘုရားနဲ့ ဓမ္မာရုံမှာ တပ်စွဲဖို့ လုပ်တာကို ဒေသခံတွေကန့်ကွက်
တိုကျိုမြို့ မြန်မာသံရုံး ပထမအတွင်းဝန် CDM တွင် ပူးပေါင်းပါဝင်လာ
နေ့စဉ် မပျက်မကွက်ဆန္ဒပြတဲ့ ဒေးဒရဲ က ဆန္ဒပြပွဲ
ကျောက်မြောင်းက မိန်းကလေးတွေနေအိမ်ကို ဝင်ရောက်စီးနင်း
ဗားကရာသပိတ်ကိုဖြိုခွင်းပြီးတဲ့နောက် ကာရံထားတဲ့ ဝါးကပ်တွေကို ရဲတွေက မီးရှို့
မကြယ်စင်ရဲ့ ဂူကိုဖောက်တဲ့ခြေရာ၊ လက်ရာတွေချန်ခဲ့
မြစ်ကြီးနားက သပိတ်စစ်ကြောင်းကို မျက်ရည်ယိုဗုံးဖြင့်ပစ်ခတ်ဖြိုခွဲ
အင်းစိန် ၊ဘုရင့်နောင်လမ်းပေါ်သပိတ် ဖမ်းဆီးခံရတာရှိပေမယ့်ဆက်လက်ဆန္ဒပြ
မကြယ်စင်ဂူကိုဖောက်တဲ့ ခြေရာ၊ လက်ရာတွေ ချန်ခဲ့
ko lann 49 นาทีที่ผ่านมา
Ko Phyo 50 นาทีที่ผ่านมา
သတင္းကို လိုရာဆြဲမတင္ပါနဲ႔။ ေဒသခံေတြ ႀကိဳဆိုၾကပါတယ္။ ပုသိမ္ေရႊေစတီလမ္းမွာ ေနပါတယ္။ အ့ဲလို လာတပ္စြဲလို႔ ေဒသခံေတြက သူတို႔အတြက္ လုံျခံဳမႈ ပိုမိုရရွိတယ္လို႔ေတာင္ ေျပာဆိုေနၾကတာပါ ဒီသတင္းကိုေတာ့ ေလာ္ဘီဆန္႔က်င္ေရးသမား မစၥတာ ဖာနန္ဒို ဖရိုကို ဒက္စ္ က ေျပာျပသြားတာပါ #Mr. Fernando Frokodess
Purity Trinity Dignity 57 นาทีที่ผ่านมา
#IIMM#UN Facebook#un twitter#un#
Purity Trinity Dignity 58 นาทีที่ผ่านมา
zaw zaw ชั่วโมงที่ผ่านมา
RIP ပါ Brother. Respect. Bro
Aye Aye ชั่วโมงที่ผ่านมา
TIN MAUNG ชั่วโมงที่ผ่านมา
He is our nation real hero and RIP him. This is history we never ever forget 😥😔
တေဇ တေဇ ชั่วโมงที่ผ่านมา
taiho noesa ชั่วโมงที่ผ่านมา
In reality, China supports the military coup behind the scenes, because they are Communist themselves. If Burma loses their democracy, all the other countries like Thailand, Malaysia, and India would be inspired to take similar actions towards militaristic rule in the future. *WE HAVE TO SUPPORT BURMA'S DEMOCRACY AT ALL COSTS!* *Keep fighting, Myanmar! Please!!!*
Chou Tzuyu Fan ชั่วโมงที่ผ่านมา
NLDအားပေးတဲ့ကောင်တွေလည်းကြည့်ပါအုန်း ဘုန်းကြီးတောင်မပါဘူး သေတဲ့လူတွေကိုဆုတောင်းတာ တော်သေးတယ်စစ်တပ်ကအာဏာထိန်းလိုက်လို့
moemin soe2014 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Mc. Ko Htet ชั่วโมงที่ผ่านมา
Hay marn sue ze ชั่วโมงที่ผ่านมา
RIP ပါ အရမ်း၀မ်းနည်းတယ် ကြည်တိုင်းမျက်ရည်ကျမိပါ တယ်
Thel Lay Poe ชั่วโมงที่ผ่านมา
ရပ်ကွက်ကောင်းလို့သာဒီအချိန်ထိအသက်ရှင်နေတာတော့သိတယ် ဘုရားကိုတော့သတိရပါတယ် ပိုင်ရာဆိုင်ရာနဲ့မှက်ိုးကွယ်လို့ရတာကိုး
khin moe ชั่วโมงที่ผ่านมา
စစ္က်ြန္စစ္ေခြးေတြ မအလလုပ္ရပ္ကရက္ရက္စက္စက္မတရားလက္နက္အားကုိးပီး ျပည္သူေတြကုိသတ္ႏွိပ္စက္ဘာတဲ႔ မကာမကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ စစ္ကြ်န္အမ်ားက်ဆုံးပါေစ ျပည္သူလူထုေတြခေလးေတြသနားစရာ ျကက္ကေလးငွက္ကေလးလုိသတ္ျကတာ မအလလုပ္ရပ္ကမေကာင္းေတာ႔ဘူး
나바오로2ชั่วโมงที่ผ่านมา
Supporting the great myanmar people !
အေမစုရဲ့ သားေလး2ชั่วโมงที่ผ่านมา
Shin Nyain Chan2ชั่วโมงที่ผ่านมา
ကြေကွဲရင်းနဲ့ပဲ ထပ်တူဆုတောင်းပေးပါတယ်..... သယံဇာတ ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံမှာ.... ကိုယ်ဆင်းရဲ စိတ်ဆင်းရဲ ခံစားရတဲ့ပြည်သူအဖြစ် ဘယ်တော့မှ ပြန်မဝင်စားကြပါနဲ့..... သင်တို့လွတ်မြောက်နိုင်ပါစေ.......
ငါ့အမေတောင် ငါ့ကိုအလုပ်ရှာပေးမယ်ပြောပြီး သူတောင် CDM ဝင်နေရတယ် ငါမုန့်ဖိုးသွားတောင်းရင် သူယောက်ကျားဘေးနားမှာဘဲသွားသွားကပ်နေရော သပိတ်ဖြိုခွင်းတာလောက်တော့ဘယ်ကြမ်းပါ့မလဲ
Myat Htoo2ชั่วโมงที่ผ่านมา
မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကိစ္စကတော့ တရုတ်နိုင်ငံကို ပေးလိုက်ပါပြီ ကချင်တွေ ဧရာဝတီမြစ်ကြောင်းတလျှောက် ခံစားကြပေတော့
Gold Palm2ชั่วโมงที่ผ่านมา
Very good decision. Thank you by our people.
San Naung2ชั่วโมงที่ผ่านมา
thuya aung2ชั่วโมงที่ผ่านมา
Terrorists army want to lie again and again
Soe Moe2ชั่วโมงที่ผ่านมา
VeNus VeNus2ชั่วโมงที่ผ่านมา
May Pearl Swarbriick2ชั่วโมงที่ผ่านมา
ကရင်ကာချုပ်ကြီးကို လေးစားပါတယ် ကချင်က မြစ်ဆုံစီမံကိန်းပြန်စပြီ
tint tint2ชั่วโมงที่ผ่านมา
Thar Thar2ชั่วโมงที่ผ่านมา
Myo Min Khaung2ชั่วโมงที่ผ่านมา
တပ်မတော်သားနဲ့ ရဲတပ်သားတွေ၊ နောင်ကြီးတို့ရှေ့မှာဘဲ ပြည်သူတွေကို နေ့စဉ် အသတ်ခံနေရ ပါပြီ။ လက်ရှိစစ်တပ်ဟာ နောင်ကြီးတို့ သစ္စာခံခဲ့တဲ့ တပ်မတော်နဲ့ရဲတပ် မဟုတ်တော့ပါဘူး။ လူသတ်သမား သူပုံဒမြ စစ်တပ်နဲ့ရဲဆိုးတပ်ဖြစ်နေပါပြီ။ CDM မှာပူးပေါင်းကြပါ။ စစ်တပ်နဲ့ရဲတပ်ထဲမှာ တပ်သားတွေမရှိတော့ရင် ဒီတပ်တွေဟာ ယမ်းမပါတဲ့ ကျည်ဆန်တွေ လိုဖြစ်သွားမှာပါ။ စစ်အာဏာရှင်တွေ အတောင်ပံပြတ်ကုန်ကြမှာပါ။ နောင်ကြီးတို့အားလုံး ဒီတော်လှန်ရေးမှာ အရေးကြီးတဲ့နေရာက ပါဝင်ဆောင်ရွက်ဘို့လိုပါတယ်။ ပြည်သူတွေက နောင်ကြီးတို့ကို လိုအပ်နေပါပြီ။ အင်တိုက်အားတိုက် အလုံးအရင်းနဲ့ တပ်ထဲကဘဲ လက်နှက်ကိုင် တော်လှန်ကြပါ‌တော့။
Mayati Lwin6423ชั่วโมงที่ผ่านมา
Tsawra Namatu3ชั่วโมงที่ผ่านมา
အော် မအလ က ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်လို့ဒီမိုဂရေစီ ရ ရင် ဘာသာတရားပျက်မှာစိုးရိမ်လို့ အာဏာရူး ရတာပါ ခုတော့ ဒင်းလုပ်ရက်ကြောင့် စေတီကျောင်းတိုက်တောင် မအလ ဒင်းကိုကြောက်နေပြီ။ တော်တော် ဘာသာတရားကြည်ညိုတာပဲနော်။
diana Bohia3ชั่วโมงที่ผ่านมา
Millitary must die badly .go to hell all off them..Burmese millitary is most dangereous in this whole world..we support pepleo go ahead.figth back.dont give up💪
Khin Nin Oo3ชั่วโมงที่ผ่านมา
Aung Pyae3ชั่วโมงที่ผ่านมา
အကြမ်းဖက် သူပုန်တွေ ဘုရားတွေ ဓမ္မာရုံ တွေမှာ မနေခိုင်းပါနှင့် ဘုန်းကြီး ဦးဇင်းတွေ နဲ့ ပြောခိုင်းပြီး မောင်းထုတ်ကြပါ သူတို့ ကြောက်နေတာ UN#R2P တို့ လာမှာမို့ ဘုရားတွေ ဓမ္မာရုံ တွေမှာ လာနေရာ ယူတာပါ နိုင်ငံတကာက ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာ အထွတ်အမြတ် နေရာမှာ ပစ်ခွင့် မရှိဘူး ပြီးတော့ အကြမ်းဖက် သမားတွေက ယုံရတာ မဟုတ်ဘူး အဲဒါကြောင့် ကိုယ့်နေရာကိုနေပါ လို့ ဆရာတော် သံဃာတော် တွေနဲ့ ပြောဆို မောင်းထုတ် တိုက်ထုတ်ကြပါ ပြည်သူတွေ ဘေးကင်းကြပါစေ 🙏🙏🙏🙏🙏
Hương Quê M.3ชั่วโมงที่ผ่านมา
🍃 🌸 🧘 🌸 🍃 🌸🍃 LO❤️VE YOU MYANMAR 🌸 🍃 🌸 🍃 🌸 🍃 🌸 🍃 🏳️‍🌈 Hương Quê 📿🕊️ 🗻 2021🎋03 06
Demo Line3ชั่วโมงที่ผ่านมา
Ye Sait Phone3ชั่วโมงที่ผ่านมา
Phyo Wai Thant3ชั่วโมงที่ผ่านมา
nyunt wai3ชั่วโมงที่ผ่านมา
WEARETHE WINDOWS3ชั่วโมงที่ผ่านมา
ဆက်လက်အရှိန်အဟုန်းမြင့်ကြ။ စစ်ကွန်မြူနစ်ကိုယ်တော်လှန်ကြ... စည်းလုံး ညီညွတ်စွာသွေးစည်းကြ အကြမ်းဖက်မူရှောင်ကြ ''. .'8️⃣8️⃣8️⃣8️⃣
CloudyyTaco3ชั่วโมงที่ผ่านมา
Say no they always did the base in 8888 too
Tweety Tiger3ชั่วโมงที่ผ่านมา
When the rulers are backed by China what can people from Burma get
sai sai3ชั่วโมงที่ผ่านมา
ညီညႊတ္ျကပါျပည္သူတို႔ ေရ ေအာင္ပြဲနီးလာပါပီ
Pan Kalay3ชั่วโมงที่ผ่านมา
myat yu3ชั่วโมงที่ผ่านมา
Pyae Pyae3ชั่วโมงที่ผ่านมา
thongs Naga3ชั่วโมงที่ผ่านมา
Support from nagaland 🇮🇳🇮🇳
Thel Lay Poe3ชั่วโมงที่ผ่านมา
စေတီတည်လို့မရတော့ တပ်တည် ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ဆိုတာမရှိဘူးလေ...သနားပါတယ်အရူချီးပန်းလေးတွေ ယတြာတွေလား ဒရာမာတွေလား သန့်သန့်ရှင်းရှင်းမနေချင်ဘဲနဲ့တော့ နေပါ့မလား... ခင်ဗျားတို့မသောက်တတ်ရင်ကျုပ်ကိုပေးပါ ကျုပ်သောက်ပေးပါ့မယ်
Sandar Myaing3ชั่วโมงที่ผ่านมา
GG GG3ชั่วโมงที่ผ่านมา
ဖခင်ထံခွင့်တောင်းပြီး တရားသူကြီး၏ခွင့်ပြုမိန့်ဖြစ် အုတ်ဂူ ဖောက်ပြီး စစ်ဆေးခဲ့ကြောင်း
Xiaomi Note3ชั่วโมงที่ผ่านมา
ခွေးအုပ်စုတွေ တော်တော်လေး တရားလွန်နေပြီး
Pont Pont3ชั่วโมงที่ผ่านมา
အာဏာလုအစိုးရ အလိုမရှိ3ชั่วโมงที่ผ่านมา
Aung San Oo3ชั่วโมงที่ผ่านมา
အဓိက က သေနတ်ဒဏ်ရာ ဖျောက်ချင်လို့ ခြေစလက်စဖျောက်ချင်လို့ တကယ့်တကယ်အစဆုံးစစ်ဆေးမယ်ဆိုရင် သက်သေဖျောက်ချင်လို့
Dean Winchaster3ชั่วโมงที่ผ่านมา
Thar Thar3ชั่วโมงที่ผ่านมา
Mote Sate3ชั่วโมงที่ผ่านมา
လမ်း ဘေး မာ x ကြ ပါ လားး
Myint Aung3ชั่วโมงที่ผ่านมา
Pinay Khant3ชั่วโมงที่ผ่านมา
အသိတရားမြင့်မားသောဆင်ခြင်တုံတရားပြည့်သောရဲရင့်သောနှလုံးသားရှိသောသူများ ၏CDM လူပ်ရှားမူ့သည် ပြည်သူလူထု လူငယ်တို့၏အသက်တို့ကိုထိရောက်စွာကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်
Sone taw Myaing3ชั่วโมงที่ผ่านมา
ဖါခေါင်းတွေလိမ်ဦးမယ်နားထောင်နေကြပါပြည်သူတို့ခင်ဗျား။ ဦးခေါင်းကိုတည့်တည့် စနိုက်ဘာနဲ့ချိန်ပြစ်တယ်၊မှန်တယ်သေတယ် တကယ်သေတာသရုပ်ဆောင်ပြီးသေ တာမဟုတ်ဘူး။ဘာ လည်းကျနော်တို့ဘက် ကပစ်တာမဟုတ်ဘူး သောင်းကျန်းသူတွေ ဝင်ပစ်သွားတာပါလို့ လိမ်ကွယ်ကွယ်ကြဦးမလို့လားစစ်တပ်ကအရာ ရှိကြီးတွေဟာယောက် ကျားတွေမှဟုတ်ကြရဲ့လားရှက်တတ်ကြရင် လဲသေသင့်တယ်။
family_in Partnership3ชั่วโมงที่ผ่านมา
This is the junta looking for toilet paper AFTER having done dirty business😸😸 = 'crying over spilled beans'
Cush cush Moon3ชั่วโมงที่ผ่านมา
😂အမျိုးဘာသာ သာသနာသစ္စာစောင့်သိမယ်ဆိုတဲ့ပြည်ခိုင်းဖြိုးတွေ 😂မင်းအဖေတို့ဘုရားငွေခိုးတယ် အခုဘုရားကိုတစာခံလုပ်ပြန်ပြီး ဘယ်ရောက်နေကြလဲ ဘာလဲမင်းတို့အမေloeလင့်မလို့လား 😜
minmm minmm3ชั่วโมงที่ผ่านมา
Chit Hnaung3ชั่วโมงที่ผ่านมา
ဒီဗွီဒီယိုဖိုင်လေးသိမ်းထားပါခင်ဗျာ၊ ဘာသာစကားအမျိုးမျိုးနဲ့ စာတမ်းထိုးပြီး သက်ဆိုင်ရာအသီးသီးကို ပို့ပေးကြပါခင်ဗျာ .....
Sala Uddin4ชั่วโมงที่ผ่านมา
Lion always lion whenever they hungry, can you recall the rohinga muslim incidents, in that time, where was your unity, as well as where have you all been ? After finishing rohinga, it's turn for you.. Again I want to say, Lion always lion whenever they hungry..
May May Oo4ชั่วโมงที่ผ่านมา
Zar Chi Htike4ชั่วโมงที่ผ่านมา
sai sai4ชั่วโมงที่ผ่านมา
ေလးစားပါတယ္ခင္ဗ်ာ နိုင္ငံတကာေရာက္ျမန္မာေတြ သြားေရာက္ကူညီေပးျကပါ 8ရက္ေနာက္ဆုံးထား ထားတာပါအျမန္CDM လုပ္ျကပါျပည္သူကျကိဳဆိုေနပါတယ္ ျမန္ျမန္ေလး
Ayeaye Maw4ชั่วโมงที่ผ่านมา
Shame on Myanmar Army & Police for what they did own people & for inhumanity, Bhuddha bless all Myanmar people,
vintageexcellence4ชั่วโมงที่ผ่านมา
Sad to see what happened to this girl. Stay strong - the people will win
Tintin Sein4ชั่วโมงที่ผ่านมา
Boss Boss4ชั่วโมงที่ผ่านมา
လူယုတ္မာေတြ လုံျခဳံမႈ့ မရွိေတာ့ဘူး
Pol Kol4ชั่วโมงที่ผ่านมา
zaw moelwin4ชั่วโมงที่ผ่านมา
ရဲ နဲ႔ စစ္တပ္က သူခိုး ဓားျမ လူရမ္းကား မဒိန္းေကာင္ေတြ နာမည္ေျပာင္းေခၚၾက ကို္ယ့္ အလွည့္ၾက မႏြဲ႕ၾကေၾကးေပါ့ကြာ
Foxbat Mig4ชั่วโมงที่ผ่านมา
Because she is Chinese. When Chinese die her property together bury